ESI ESI AYTYUNS TỤFUO FOTO NA KỌMPUTA - ITUNES - 2019
Esi esi na iPhone, iPod ma ọ bụ iPad na kọmputa
iTunes bụ mgbasa ozi na-ewu ewu maka kọmputa na-agba Windows na Mac os, nke a na-ejikarị ejikwa ngwaọrụ Apple. Taa, anyị ga-elele ụzọ ị ga-esi na ngwa Apple gaa na kọmputa.
A na-ejikarị iTunes maka Windows iji jikwaa ngwaọrụ Apple. Na mmemme a, ịnwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla metụtara ịnyefe ozi site na ngwaọrụ na ngwaọrụ, mana ngalaba na foto, ọ bụrụ na ị hụla, na-efu ebe a.
Kedu esi nyefee foto site na iPhone gaa na kọmputa?
Ọ dị mma, iji nyefee foto site na iPhone na kọmputa ahụ, anyị agaghị achọ iji iji mgbasa ozi iTunes agbakọta. N'okwu anyị, a ga-emechi usoro a - anyị achọghị ya.
1. Jikọọ ngwaọrụ Apple gị na kọmputa gị site na iji eriri USB. Unlock ngwaọrụ, jide n'aka na itinye paswọọdụ. Ọ bụrụ na iPhone jụrụ ma ọ bụrụ na ịkwesịrị ịtụkwasị kọmputa ahụ obi, ị ga-ekwesịrị ikwenye.
2. Mepee Windows Explorer na kọmputa gị. N'ime ndị na-agagharị agagharị ị ga-ahụ aha ngwaọrụ gị. Mepee ya.
3. Window na-esote ga-echere gị nchekwa "Nchekwa dị n'ime". Ị ga-achọ imeghe ya.
4. Ị nọ na ebe nchekwa dị n'ime ngwaọrụ ahụ. Ebe ọ bụ site na Windows Explorer ị nwere ike ijikwa foto na vidiyo, windo ọzọ ga-echere gị otu nchekwa. "DCIM". O nwere ike inwe ihe ọzọ ị ga-emeghe.
5. Ma n'ikpeazụ, na ihuenyo gị ga-egosipụta foto na foto ndị dị na ngwaọrụ gị. Biko mara na ebe a, na mgbakwunye na ihe oyiyi na vidiyo e weere na ngwaọrụ ahụ, e nwekwara ihe oyiyi eburu na iPhone site na isi mmalite.
Iji nyefee foto na kọmputa, ị ga-ahọrọ ha (ị nwere ike ịhọrọ n'otu oge na ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl + A ma ọ bụ họrọ foto ụfọdụ site na ijide isi Ctrl) wee pịa igodo ọnụ Ctrl + C. Mgbe nke a gasịrị, mepee folda ahụ nke a ga-ebufe ihe oyiyi, ma pịa igodo ọnụ Ctrl + V. Mgbe obere oge gachara, a ga-esi na ya gaa na kọmputa.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike jikọọ ngwaọrụ gị na kọmputa site na iji eriri USB, ịnwere ike ịnyefe foto na kọmputa gị site na iji nchekwa igwe ojii, dịka ọmụmaatụ, iCloud ma ọ bụ Dropbox.
Olileanya, anyị nyeere gị aka imeri nsogbu nke ịkwaga foto site na ngwaọrụ Apple na kọmputa.
Kedu ihe mere eji eme ihe ngwa ngwa na ngwa ngwa, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla n'ime usoro ahụ? CPU ibu ihe ruru 100% - esi ewelata ibu
Esi tuo egwu na YouTube
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Integrated Intel HD Graphics 2500 adapter
Kedu esi eji akaghachite My Files n'ụzọ ziri ezi
A na-eji mpaghara gburugburu Photoshop eme ihe. A na-eji ha emepụta ihe dị iche iche nke saịtị ahụ, mgbe ị na-emepụta ihe ngosi, iji wepụta foto na avatars. Na nkuzi a m ga-egosi gị otu esi eme gburugburu gburugburu Photoshop. Akara nwere ike ịbịaru ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ iji ngwá ọrụ "Oval area". Họrọ ngwá ọrụ a, jide igodo SHIFT ma mepụta nhọrọ. GụKwuo
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na "Ngwaọrụ na Mpịakọta" anaghị emeghe na Windows 7
Ajụjụ okike na Mail.ru
https://termotools.com ig.termotools.com © ITunes 2019